ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်: မင်းဂျွန်စိုး. နိုင်မင်းအောင်. ဇော်အားမာန်..ကျောကေခိုင် ပဲးခူမြို့မှာဝေတဲ့နှင်း skip to main |
***ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ရောက်လာသူအားလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ***ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်သည် မူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖေါက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများအား ထာဝစဉ်ရှင်သန်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည် *** ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရပ်မြေ ပခုက္ကူမြို့သို့လည်း လာလည်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် *** မင်းဂျွန်စိုး. နိုင်မင်းအောင်. ဇော်အားမာန်..ကျောကေခိုင် ပဲးခူမြို့မှာဝေတဲ့နှင်း Sunday, June 12, 2016